Dreame D9 Max၊ နောက်ဆုံးပေါ် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စက်ရုပ် ဖုန်စုပ်စက် | Gadget သတင်း
Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် | 30/12/2021 10:59 | ယေဘုယျ, reviews
စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်များသည် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့်လိုက်လျောညီထွေအရှိဆုံးအိမ်များ၏ "မဖြစ်မနေ" တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ၀ကို ပိုမိုလွယ်ကူစေမည့် အမှီအခိုကင်းသော အရာများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေသည့် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ရလဒ်နှစ်ခုလုံးတွင် သိသာထင်ရှားသော တိုးတက်မှုနှင့် တိုးတက်မှုများကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
ဤအချက်မှာ ငါ့ကို Dreame ဤနည်းပညာထုတ်ကုန်အကွာအဝေးတွင် ငွေတန်ဖိုးသင့်ပြီး ကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းချက်များစွာကို ပေးဆောင်ပြီး ရက်ချိန်းကို လက်လွတ်မခံဘဲ ထားလိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ရလဒ်ကောင်းများနှင့်အတူ စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်အသစ် Dreame D9 Max ကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ရှာဖွေပါ၊ သင့်ဝယ်ယူမှုသည် အမှန်တကယ် တန်သည်ရှိ၊ မရှိကို ချိန်ဆနိုင်ပါမည်။
3 ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် လျှောက်လွှာ
4 နည်းပညာများနှင့် တည်းဖြတ်သူ၏ သဘောထားကို အသုံးပြုသည်။
အခြားအချိန်များနှင့် ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ပင်၊ Dreame သည် အခြားသူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် အရည်အသွေးတည်ဆောက်မှုတွင် အချိုးအကွေ့တစ်ခုအဖြစ် အမှတ်အသားပြုပါသည်။ ၎င်း၏ချိန်ညှိထားသောစျေးနှုန်းသည် အရည်အသွေးအရ သိသာထင်ရှားခြင်းမရှိကြောင်း သေချာစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုံမှန်စျေးကွက်အချိုးအစားများဖြင့် စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်ကို ရင်ဆိုင်နေရပြီး အတိုင်းအတာ 35 × 9,6 တွင် 3,8Kg ခန့်ကျန်ရှိနေမည့် အလောင်းအစား၊ ဤစက်ပစ္စည်းများတွင် အလေးချိန်သတ်မှတ်ချက်များသည် အလွန်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာ မှန်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ ၎င်းတို့ကို သယ်ဆောင်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းသည် အဓိကရောင်းချသည့်နေရာများတွင် ယူရို 299 ဝန်းကျင် တုန်လှုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် အပိုလျှော့စျေးလိုချင်ရင် ကူပွန်ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ DREAMED9MAX.
ရှုထောင့်: 35 × 9,6 စင်တီမီတာ
အလေးချိန်: 3,8 ကီလို
ရရှိနိုင်အရောင်များ: တောက်ပသော အနက်ရောင်နှင့် တောက်ပသော အဖြူရောင်
ဖုန်စုပ်ခြင်းနှင့် ပွတ်တိုက်ခြင်းတို့ ပေါင်းစပ်ထားသည်။
အောက်ခြေတွင် အားဖြည့်ထားသော အလယ်ဘရပ်ရှ်တစ်ခု ရှိပြီး အမျိုးမျိုးသော နည်းပညာများ ပေါင်းစပ်ထားသည့် အပြင် တစ်ဖက်မှ စုတ်တံတစ်ခု ရှိသည်။ ထိပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပင်မလက်စွဲထိန်းချုပ်မှုခလုတ်သုံးခုကို တွေ့ရသည်၊ ယခု ဂန္ထဝင် "hump"၊ လေဆာနည်းပညာနှင့် ရေတိုင်ကီအတွက် ချိန်ညှိမှုရှိသော စက်ရုပ်အားလုံးက တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်၊ ၎င်းတို့သည် Roborock နှင့် Dreame ထုတ်ကုန်နှစ်ခုလုံးတွင် ပုံမှန်တည်ရှိသည့် တံခါးအပေါ်ပိုင်းရှိ တံခါးနောက်တွင် တည်ရှိပြီး ဖုန်ကန်ကို ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံတွေကနေ မြင်ရတဲ့အတိုင်း အနက်ရောင်နဲ့ မော်ဒယ်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားပါတယ်။
ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Dreame သည် ဤကဏ္ဍကို ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပြီး၊ ဤအခါသမယတွင် ရိုးရှင်းသော်လည်း လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည်- စက်ပစ္စည်း၊ အားသွင်းအခြေခံနှင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ ဘေးဘက်စုတ်တံ၊ စုပ်ခွက်ပါရှိသော ရေကန်၊ သန့်ရှင်းရေးကိရိယာ (စက်ရုပ်အတွင်း၊ အမှိုက်ကန်ရှိရာ) နှင့် ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲ။ နောက်ထပ် ကြမ်းတိုက်၊ အစားထိုး စစ်ထုတ်မှု သို့မဟုတ် အစားထိုး စုတ်တံ ကဲ့သို့သော အစားထိုး ပစ္စည်းတစ်ခုကို ကျွန်ုပ် လွတ်သွားပါသည်။
စက်တွင် ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။ ဝိုင်ဖိုင်, သို့သော် ဤစက်ပစ္စည်းများတွင် များသောအားဖြင့် ဖြစ်တတ်သကဲ့သို့၊ ၎င်းသည်သာ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သတိပြုရမည်ဖြစ်သည်။ 2,4GHz ကွန်ရက်များဖြင့် ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် n စနစ်တစ်ခုကိုတွေ့သည်။LDS 3.0 လေဆာ LiDAR လမ်းညွှန် အတော်လေး ထိရောက်တယ်၊ အညစ်အကြေးအတွက် 570ml နှင့် ရေ 270ml သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ပေးလိုသော သန့်ရှင်းရေးအရည်သည် စက်ပစ္စည်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကြမ်းပြင်နှစ်ခုလုံးနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသရွေ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲကို ယခင်က တိုင်ပင်သင့်သည့် အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
စုပ်ယူမှုပါဝါအတွက်၊ Dreame သည် ဤ 4000 Pascal pro မော်ဒယ်ကို တင်ပြသည်၊ တန်ဖိုးအကောင်းဆုံး ပြိုင်ဘက်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ အခြားထုတ်ကုန်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ရာတွင် အလွန်မြင့်မားပြီး ထိရောက်မှုရှိသော ပါဝါ။ စုပ်ယူမှုပါဝါကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ စုစုပေါင်း 50db နှင့် 65db အကြား ထုတ်လွှတ်သော အသံများကို တွေ့ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက ၎င်းသည် သိသိသာသာ အသံတိတ်စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်လာစေသည်။ ဆူညံသံသည် ကျွန်ုပ်တို့ အပလီကေးရှင်းမှတဆင့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော မတူညီသော ပါဝါအဆင့် လေးခုပေါ်တွင်သာ မူတည်ပါသည်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် 5.000 mAh ဝန်းကျင်ရှိသည်။ အမှတ်တံဆိပ်မှ ကြေငြာထားသော၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပတ်ပတ်လည် သန့်ရှင်းရေးကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိနစ် 150 သို့မဟုတ် 200 မီတာအထိ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဤမျှကြီးမားသောအိမ်မရှိသောကြောင့် (မျှော်လင့်ထားသည်)၊ သို့သော် သန့်ရှင်းရေးအပြီးတွင် ၃၅% ဝန်းကျင်ရောက်ရှိလာသည်ဟူသောအချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ပါ။ အလွန်အသေးစိတ်သော သန့်ရှင်းမှုတစ်ခု၊ ယခင်ကထက် မကျော်လွန်ဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်၏ ဤအမျိုးအစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှ မျှော်လင့်နိုင်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကိုက်ညီသော၊ 3D (LiDAR မှတဆင့်) အာရုံခံကိရိယာများ ကာစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို မြေပုံဆွဲခြင်း။ ပထမဖြတ်သန်းမှုတွင် သင်ကောင်းစွာသိသည့်အတိုင်း၊ ၎င်းသည် အနည်းငယ်နှေးကွေးမည်ဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်မှစ၍ ၎င်းသည် လေ့လာသိရှိထားသည့်အချက်အလက်များကြောင့် နေရာနှင့်အချိန်ကို အခွင့်ကောင်းယူမည်ဖြစ်သည်။
အချို့နေရာများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို တားမြစ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်၊ မည်သို့မှမဟုတ်ပါက၊ နှင့် ထပ်တူပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အမေဇုံ Alexa ထို့ကြောင့် တာဝန်ကျနေသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ virtual assistant ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမေးလျှင် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုမိုလွယ်ကူလာမည်ဖြစ်သည်။ စက်၏တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းကို Mi Home အက်ပ်လီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အန်းဒရွိုက် လျှင်အဖြစ် iOS ကို. အလုပ်လုပ်မယ်။ ငါတို့အိမ်မှာမရှိရင်တောင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် App၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်နေရာမှမဆို အိမ်၏သန့်ရှင်းရေးကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး မြေပုံညွှန်းကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကာ သန့်ရှင်းရေးဧရိယာများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
နည်းပညာများနှင့် တည်းဖြတ်သူ၏ သဘောထားကို အသုံးပြုသည်။
Dreame D9 မှာ တွေ့ကြမယ်။ မက်စ် Dreame ကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများတွင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အဓိကနည်းပညာများ စိုထိုင်းဆထိန်းချုပ်မှုစနစ် ပါကေးကို မပျက်စီးစေဘဲ သန့်ရှင်းရေးတွင် အသုံးပြုသောရေကို စီမံခန့်ခွဲရန်အပြင် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော suction စနစ်၊ ကော်ဇောမြှင့်တင် ဖုန်စုပ်စက်၏ ပြင်းထန်မှုကို ထိန်းညှိရန် ကော်ဇောများကို ကြမ်းပြင်နှင့် ကွဲပြားစေမည်ဖြစ်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် HEPA စစ်ထုတ်မှု ပါဝင်သည်။
LiDAR scanner ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော လမ်းကြောင်းကောင်းများ ၊ ပါဝါ ၊ ဆူညံမှု မရှိဘဲ ၊ ဖုန်စုပ်ခြင်း ၊ လမ်းကြောင်း များ သည် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ အတွေ့အကြုံ အရ အလွန် ကောင်းမွန် ပါသည် ၎င်းကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့် ထုတ်လုပ်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ တိကျသောကမ်းလှမ်းမှုများဖြင့် ယူရို 299 မှအကွာအဝေးရှိ စျေးနှုန်းဖြင့် သင်ဝယ်ယူနိုင်သည်၊ ၎င်း၏အရည်အသွေး/စျေးနှုန်းအချိုးအရ စမတ်ရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်။
အပေါ်တင်ခဲ့သည်: ဒီဇင်ဘာလ 30 2021
နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက်: ဇန်နဝါရီလ42022
တစ်ခါတလေ ပွတ်တိုက်ရင် အမှတ်အသားတွေ ထွက်လာတယ်။
၎င်းတို့တွင် အစားထိုးရန် အပိုဒြပ်စင်များ ပါဝင်ခြင်းကြောင့် လွဲချော်နေပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Dreame D9 Max၊ နောက်ဆုံးပေါ် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စက်ရုပ် ဖုန်စုပ်စက်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
Dreame H11 အစိုနှင့်အခြောက်၊ ဤလေဟာနယ် / ကြမ်းတိုက်ခြင်း၏ နက်ရှိုင်းသော သုံးသပ်ချက်